khadka caawimaada kireystaha: (03) 9416 2577 - Tenants Victoria
khadka caawimaada kireystaha: (03) 9416 2577
khadka Caawimaada Kireystaha waa macluumaad bilaash ah oo qarsoon iyo adeeg tallo oo aasaasi ah 03 9416 2577.
Wixii macluumaad ah ee ku saabsan arimahaaga gaarka ah markaad isticmaalayso adeegyadeena, eeg Qorshaha Arimaha gaarka ah ee Adeegga Sharciga.
Wixii macluumaad ah ku saabsan heerarka aad ogolaato markaad isticmaalayso adeegyadeena, ka eeg xeerkeena adeega macaamiilka.
Waxaan caawinaa deganayaasha iyo kireystayaasha ka kireysanaya hoy degitaan Victoria.
Ma caawino mulkilayaasha, kuwa leh ama wakiilada. Landlords mulkiilayaashu waxay u wici karaan Arimaha Isticmaalayaasha Victoria wixii tallo ah 1300 55 81 81.
Waxaan kugu caawin karno
Khadka caawinta kireystayaasha waxaan ku bixin karnaa macluumaad iyo tallo aasaasi ah oo ku saabsan dhibkaad ku qabto mulkiilaha, hantiilaha iyo wakiilada iyo waxoogaa ah arimaha kireysiga oo la xiriira qalalaasaha qoyska.
kama bixino tallo dhibaatooyinka u dhaxeeya deriska iyo kireystayaasha, laakiinse waxaad la xiriiri kartaa xarunta sharciga bulshada xaafada.
Tallo aasaasi ah iyo macluumaad kaliya
Waxaan isku dayaa inaan sii wicitaanada sida gaaban ee suurtogalka ah, laakiin waqti ku filan oo ay si fiican u jawaabaan aad baaritaan. Guud ahaan, wicitaanada qaado oo ku saabsan 5-10 daqiiqadood. taliyayaal Our ku siin karaan oo keliya warbixin iyo talo aasaasiga ah by phone. Haddii dhibaato kiraysiga adag yahay markaa laga yaabaa in aan ka dhigi waqti ballan si aad inaad na aragtaan.
Adeegeena taleefanka baahi badan ayaa loo qabaa waxaana laga yaabaa inaana awoodin inaan ka jawaabto taleefankaaga isla markiiba. Waxaana laga yaabaa in wicitaankaaga la geliyo saf waxaana looga jawaabi doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah laakiinse fadlan ogow in wakhtiyada sugitaanku inta lagu jiro wakhtiyada mashquulka ah ay badanaa yihiin 20 daqiiqo ama wax ka badan. Haddii aad maqasho baaqa mashquulka tan micnaheedu waxaa weeye safku wuu buuxaa waxaanad isku soo deyi kartaa mar dambe. Samirkaaga waan kahelnaa.
iska ilaali sugitaanka dheer
Su’aashaada waxaa laga yaabaa in lagaga jawaabay website keena haddaba. Waxaad kaheli kartaa macluumaad guud oo ku saabsan sharciga mowduucyada guud ee kireysiga oo badan iyo sidii kale warqadaha xaqiiqda iyo hagitaanka tallaabo tallaabada ah ee: tallo.
Haddii aad ugu baahan tahay tallo si degdeg ah, la xiriir Gudbinta Sharciga Kireystaha: adeeg bixiye bedel ah oo bixinaya adeega jawaabta iimeylka ee isla maalinta ah.
ka hor intaadan wicin
waa inaad hubisaa jeegareynta wakhtiyada furitaanka iyo xiritaanka ee hoose oo aad waxyaalahaan soo socda gacanta ku heysataa:
warqad iyo qalin
magaca mulkiilahaaga iyo shirkada guri kireynta
wixii dukumiinti ah ee khuseeya, oo ay ku jiraan heshiiskaaga kireysi, wixii ogeysiin ah ee aad heshay sida Ogeysiiska Ka baxa iyo wixii waraaqo ah ee aad u dirtay ama ka timid mulkiilahaaga ama wakiilka shirkada kirada
Isniin 9-ka subaxnimo ilaa 4-ta galabnimo
Talaado 9-ka subaxnimo ilaa 4-ta galabnimo
Arbaco 9-ka subaxnimo ilaa 4-ta galabnimo
Khamiis 9-ka subaxnimo ilaa 4-ta galabnimo
Jimce 9-ka subaxnimo ilaa 4-ta galabnimo
waa xidhan yahay Sabida iyo Axadda iyo maalmaha fasaxa dadweynaha
Helpline | Somali